देशमा आएको संघीयताले महिलालाई पनि धेरै अधिकार दिएको छ - पिंकी यादव - Yatra Daily
Home बिचार/अन्तर्वार्ता देशमा आएको संघीयताले महिलालाई पनि धेरै अधिकार दिएको छ – पिंकी यादव
बुवा बिन्देश्वरी प्र.यादव तथा आमा जनारसी देवी यादवको दाम्पत्य जिबनवाट ई. स. १९७८ सेप्टेम्बर २१ मा भारत विहारको रक्सौलमा जन्मिएकी पिंकी यादव चार दिदीबहिनी र दुई दाजुभाई मध्येको दोस्रो सन्तान हुन उनि । शिक्षित र सम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमीमा उनको बाल्यकाल राम्रो वितेको उनले बताइन् ।
२१ बर्षको उमेरमा धार्मिक रितिरीवाज अनुसार पर्सा जिल्लाको मनियारी निवासी प्रदिप यादव संग विवाह बन्धनमा बाधिन पुगेकी हुन् । हाल यादव समाजवादी पार्टी नेपालको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका छन । विवाहपछि पनि घर परिवार र श्रीमानको सहयोगबाट बिएड सम्म अध्ययन गर्न सफल उनी घर परिवार छोराछोरी कार्यक्षेत्र र राजनीतिलाई अगाडी बढाउँदै आएकी छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा वीरगंज महानगरबाट उपमेयर पदमा प्रतिस्पर्दा गर्दै राजनीतिमा लागिरहेकी छन् । हाल महिला समाजवादी पार्टी प्रदेश नं. २ को उपाध्यक्ष पदमा रहि सामाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रमा सकृय भई कार्य गरिरहेकी पिंकी यादवसंग गरेको कुराकानी :
१) वर्तमान समयमा महिलाहरुको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
२) महिलाहरु प्रमुख नेतृत्व तहमा आउन नसक्नुको कारण के पाउँनु भएको छ ?
३) महिलाहरुलाई नेतृत्व तहमा ल्याउन अब के गर्नु पर्छ ?
४) अहिले स्थनीय तहमा पुगेका उपमेयरहरुको जिम्मेवारी पनि घुमाउरो पारोले श्रीमान्हरुले नै चलाइ रहेका छन् । यसलाइ तपाई के भन्नु हुन्छ ?
५) तपाई वीरगंज महानगरपालिकाको उपमेयरमा पराजित भए पनि निर्वाचित उपमेयरलाई के कस्तो सुझाव र सहयोग गरिरहनु भएको छ ?
६) निर्वाचन पछि राजनीति कार्यक्रममा यहाँको सक्रियता कतिको बढेको छ ?
७) श्रीमान्/श्रीमती दुबै जना राजनीति पेशामा । यसले व्यक्तिगत जिवनमा कतिको असर पार्छ ?
८) हिजोको दिनमा स्थानीय चुनावमा पराजित हुनुको कारण यहाँले के पाउँनु भएको छ ?
९) अबको आउदो दुई वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ । के को तयारीमा हुनुहून्छ यहाँ ?
च्ुाुनाव लड्नु पूर्व नै समाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेको छु । आगामी दिनमा पनि चुनाव लड्ने तयारीमा नै लगेको छु । नगरपालिकामा हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा गरिब, दलित पिडित परिवारको सुख, दुःखमा हातोमालो गर्दै सधै जनताको सेवामा आफुलाई समर्पित गरेको छु । आफ्नो शक्ति, क्षमता र पहुँचको बलमा समाजमा विभिन्न सेवा तथा सिपमुलक कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आईरहेको छु । समय र परिस्थीति अनुसार जनताल गरेको मुल्याङ्खनको आधारमा नै समय अनसार तय गर्ने छु । madhyanepal.com बाट
Previous articleलोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा मधेशी युवाद्वारा प्रदर्शन
Next articleपाँच लाखको योजनामा १ लाख २५ हजार वीरगन्जका मेयर तथा इन्जिनियर ओभरसियरको कमिसन !